2 VaKorinde 13 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 VaKorinde 13:1-14
13 Iyi inguva yechitatu+ yandiri kuuya kwamuri. “Nyaya dzose dzinofanira kusimbiswa kana papupurirwa nezvapupu zviviri kana zvitatu.”+ 2 Ndakambotaura kare uye, sokunge kuti ndiripo kechipiri asi ini ndisipo zvino, ndinofanotaura kune vaya vakambotadza uye kune vamwe vose, kuti kana ndikauyazve handizoregi chero munhu upi zvake,+ 3 zvamuri kutsvaka uchapupu hwaKristu anotaura mandiri,+ Kristu uyo asiri munhu asina simba kwamuri asi aine simba pakati penyu. 4 Chokwadi, iye akarovererwa+ nokuda kwokusava nesimba,+ asi mupenyu nokuda kwesimba raMwari.+ Chokwadi, isu hatinawo simba pamwe chete naye, asi tichararama pamwe chete naye+ nokuda kwesimba raMwari+ riri mamuri. 5 Rambai muchizviedza kuti muone kana muri mukutenda, rambai muchizviedza kuti muone kuti makadini.+ Kana kuti hamuzivi here kuti Jesu Kristu ari pamwe nemi?+ Kana zvisina kudaro, hamuna kutenderwa. 6 Chokwadi ndinotarisira kuti muchasvika pakuziva kuti hatisi vanhu vasina kutenderwa. 7 Zvino tinonyengetera+ kuna Mwari kuti murege kuita chinhu chakaipa, kwete kuti isu tiite sevanhu vakatenderwa, asi kuti muite zvakanaka kwazvo, kunyange isu tingaita sevanhu vasina kutenderwa. 8 Nokuti hapana chatinogona kuita chinopesana nechokwadi, asi chinotsigira chokwadi chete.+ 9 Chokwadi tinofara pose patinenge tisina simba asi imi muine simba;+ uye tinonyengeterera+ izvi, iko kururamiswa kwenyu. 10 Ndokusaka ndichinyora zvinhu izvi ndisipo, kuti, kana ndavapo, ndirege kukuomeserai kwazvo+ maererano nesimba randakapiwa naShe, kuti ndivake,+ kwete kuti ndiputse. 11 Pakupedzisira, hama, rambai muchifara, muchiruramiswa, muchinyaradzwa,+ muchibvumirana pakufunga,+ muchigara norugare;+ uye Mwari worudo neworugare+ achava nemi. 12 Kwazisanai nokutsvoda kutsvene.+ 13 Vatsvene vose vanokukwazisai. 14 Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu Kristu norudo rwaMwari nokugoverana mumudzimu mutsvene ngazvive nemi mose.+
2 VaKorinde 13